FIVELOMANA AO MAHAJANGA : Mbola azo ampiroboroboina ny seha-pihariana zavamaniry
Tanàna ahitana fianakaviana maro mivelona sy misehatra amin’ny fambolena sy fivarotana voankazo, voninkazo, zava-maniry fanao lohamenaka… eto Mahajanga. 20 janvier 2022
Fepetra maro anefa no iainkinan’ny fanaovana ho fihariana azy ireny toy ny toetany, ny lalàna apetraky ny fanjakana sy ny sehatra iraisam-pirenena. Na izany aza ifotoran’ny fiveloman’ny fianakaviana maro izany. Haingon-tanana ny voninkazo, mahafinaritra ny maso Eny Amborovy no tena misy ny mpivaro-boninkazo eto Mahajanga. Manomboka eo amin’ny masera Sacré-Coeur ka hatrany amin’ny EPP Amborovy dia misy mivarotra voninkazo avokoa. Eo ampitan’ny masera fotsiny efa misy folo. Mbola misy mivarotra koa anefa ao amin’ny Agriculture, eo ampitan’ny EPP ary ao amin’ny vitrine de Madagascar. Isan-karazany ny zavamaniry hita eny. Misy ireo avy eto Mahajanga ihany ary misy ny hafarana any amin’ny Faritany hafa toa an’Antananarivo sy Toamasina, hatrany Manakara.
1000 Ariary ny farany mora amin’ny zanaka zavamaniry ary 600 000 Ariary kosa ny farany lafo eo amin-dRasoarimalala Victorine, fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Mme Lala. Misy ny voninkazo, misy ny zanakazo fihinam-boa ary misy ny zavamaniry atao fanafody. Ny zanaka hazo fihinam-boa no anisan’ny mora toy ny voasary, manga, konikony, corossol, citron Mandarine… Ny manga grefy kosa dia manomboka amin’ny 5 000 Ariary ny vidin’ny iray. Ny papay kosa manomboka amin’ny 3 000 Ariary ka hatramin’ny 10 000 Ariary. Ny zanaka voanio kosa dia manomboka amin’ny 10 000 Ariary ka hatramin’ny 50 000 Ariary. Mora toy izany koa ny voninkazo “bougainvilliers”, “crotons” sy “palmiers” izay mbola misy azo amin’ny 1 000 Ariary. Avy eo dia miaka-bidy araka ny karazany sy ny habeny ny voninkazo. Ny allamanda izao dia manomboka amin’ny 5 000 Ariary ka misy hatramin’ny 25 000 Ariary. Ny adénium na rosiers du desert, manomboka amin’ny 5 000 Ariary ka hatramin’ny 60 000 Ariary. Ny palmiers dia manomboka amin’ny 1 000 Ariary ka hatramin’ny 240 000 Ariary. Ny fica kosa dia 600 000 Ariary ny iray efa lehibe. Ny michenda indray dia 40 000 Ariary ka hatramin’ny 80 000 Ariary. Mbola hita eny ihany koa ny voninkazo toy ny amaryllis, ny géranium, ny hibiscus… An-jatony maro ny karazana zavamaniry amidy eny Amborovy. Ary betsaka isaky ny karazany ny ananan’ny mpivarotra tsirairay azy ireo. Ny an’i Mme Lala fotsiny izao dia miisa arivo mahery ny crotons, 1500 ny palmiers, zanakazo fihinamboa 4 000 ary voninkazo isan-karazany mihoatra ny 5 000 isa. Mahavelona tsara ny asa fivarotam-boninkazo. Mampiasa olona enina i Mme Lala miaraka aminy mikarakara sy manondraka ireo zavamaniry ireo. Izy ihany no mampitombo taranaka azy. Eo amin’ny roa volana eo raha bouturage ary dimy ka hatramin’ny enim-bolana kosa raha mampaniry voany. Arakaraka ny vanim-potoana ny zavamaniry lafo. Amin’izao fahavaratra izao dia ny hazo fihinam-boa no tena mandeha. Tamin’ny andro nandalovanay teny dia vao nahalafo zanaka manga grefy miisa 300 i Mme Lala.
« 12 taona no nidirako tamin’ny sehatrasa zavamaniry. Tsy nianatra manokana momba ny fambolena aho fa zanaka mpamboly anana ary efa tia mamboly hatramin’izay. Miezaka manaraka fiofanana aho rehefa misy fiofanana mikasika ny fambolena voninkazo ary mahavita mankany an-drenivohitra mihitsy. Miara-miasa amin’ireo mpamboly amin’ny Faritra hafa koa izahay ka mifanakalo voninkazo » , hoy izy. Ankehitriny dia efa mahavita manaingo tanàna i Mme Lala. Misy ireo olona maka azy mamboly sy manaingo ny tanànany. Mamboly bozaka na gazao na gazon ary manao rindrina zavamaniry na mur vegetal ihany koa. Tsy ny tanàna ihany anefa no haingoany fa ny birao koa ary efa anisan’ny nampiasa ny traikefany ny ENEM sy ny IUGM. Mivarotra zezika sy tany mainty ihany koa izy ireo ka ny zezika dia 5 000 Ariary ny gonin-tsimenitra. Ny tany mainty kosa 3 000 Ariary ny gonin-tsimenitra ary 100 000 Ariary ny kamiao kely iray.
Ahiatana ravinkazo sy hodi-kazo fanao fanafody
Ravina voandelaka, 150 maladies, aferontany, ravina kininimpotsy, mandravasarotra, sodifafana, allamanda, vahona, ambanivoa, katrafay, pervenche… Tsy tambo isaina ireo ravina, bozaka sy hodi-kazo ampiasain’ny Malagasy amin’ny fitsaboana… Ny raokandro malagasy sy ny mpitsabo nentim-paharazana dia mampiasa ireny zavamaniry ireny, fa ny fatra no matetika olana ka mety mahatonga fahasimban’ny voa amin’ny olona iray. Misy anefa ny raokandro efa nohatsaraina ary voatily amin’ny laboratoara toy ny an’ny IMRA an’ny Pr Ratsimamanga sy ny Homéopharma ary ny Vaniala… izay atokisana amin’ny fahasalamana noho izy ireo efa nandalo ny fenitra sy masontsivana rehetra mikasika ny vokatra ampiasaina amin’ny fahasalamana. Efa jifain’ny Malagasy maro ny vokatr’ireo orinasa taloha lehibe ireo. Ny IMRA moa dia efa manana hopital lehibe sy mpitsabo azy manokana eny avarabohitra Itaosy Antananarivo. Ny vokatra Homéopharma sy Vaniala kosa dia efa hita manerana an’i Madagasikara. Raha eto Mahajanga manokana dia maromaro ny ivon-toerana Homéopharma izay ahitana mpitsabo ihany koa. Mampiavaka azy ireo manokana ny otra.
Ankoatra izay anefa dia misy mpivarotra zavamaniry fanao fanafody ihany koa ao amin’ny bazary Mahabibo. Misy ny mbola zavamaniry ravina, vahatra na taho na voninkazo. Misy kosa ny efa nohajariana ka lasa vovony sy ranony. Hita eny, ohatra, ny farehitra izay voalaza fa mampaniry volo. Ny vahona itsaboana aretina maro. Ny sodifafana itsaboana sofina, ny ravintsara sy mandravasarotra itsaboana aretina maro, ny katrafay, tanatanampotsy…. Tsy misy dokotera eny fa ny mpivarotra avy hatrany no anontaniana. Lazaina azy ny maharary dia izy no manoro ny zavamaniry ampiasaina sy ny fomba fampiasa azy. Ireo zavamaniry efa voajary kosa dia efa misy fomba sy fatra fampiasana azy.
Faritra mahavokatra manga, mokonazy …
Ny manga, konikony, ny mokonazy ary ny voasary makirana sy ny voamadilo no tena ahafantarana an’i Mahajanga na dia maro karazana aza ny voankazo vokatra eto. Coeur de boeuf, kida zanatany, sakoa, caramboles, corossoles, oranges, voasary makirana, goavy, pitaya… Saika hita eto avokoa ireo karazana voankazo maniry amin’ny tany mafana afa-tsy ireo tena mitady hamandoana toy ny letisia sy ny longani….Isaky ny fotoanan’ny manga dia efa ahitana kesika amin’ny fotoran’ny manga ivelan’i Mahajanga. Ireo no kesika apetrak’ireo mpiantoka mividy ny manga amin’ny fotony ka mitondra izany amidy any an-drenivohitra. Betsaka ireo olona manana velaran-tany midadasika no manao fambolena manga. Ireo manga grefy no tena lafo. Maro karazana ny manga grefy eto Mahajanga satria ny FOFIFA eto Mahajanga no nanao ny karoka sy andrana ary fanaparitahana ny fampivadiana karazana manga samihafa. Mahatratra 1 000 Ariary ka hatramin’ny 3 000 Ariary ny manga iray araka ny karazany eo Tsaramandroso manoloana an’i Tsaralaza. Ankoatra ireo manga efa mahazatra toy ny manga Diégo, manga esy, manga Zanzibar, manga sakoa, manga rano, manga gasy, manga lava, manga bory, manga pomme dia misy ny manga papay na Bombay, langouste, Irwin, Valencia sy ny maro hafa (misy karazana 50 ireo manga grefy novokarin’ny FOFIFA). Iny fokontany Amborovy hatrany Ampitolova iny no mpamatsy manga grefy eto Mahajanga. Ny konikony koa dia mbola anisan’ny mamatsy ihany koa an’Amborovy, saingy maro ihany koa ny avy any Mahajanga faharoa sy Marovoay ary amin’iny lalam-pirenena fahaefatra iny. Ny sakoa indray dia tsy misy mpamokatra manokana loatra fa samy manana any an-tokotaniny, dia ireo manana maro no mivarotra.
Mila fahazoan-dalana ny fitrandrahana zavamaniry voajanahary
Azo trandrahina tsara ny zavamaniry anaty ala, saingy mila fanomezan-dalana avy amin’ny tompon’andraiki-panjakana mahefa. Ny sampan-draharahan’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy no misahana izany eto Mahajanga. Betsaka ny efa misy mitrandraka toy ny longoza, izay nametrahan’ny Dior fambolena mihitsy moa ao Ranomafana Ifanadiana ao amin’ny Faritra Vatovavy. Aty amin’ny Faritra Boeny indray dia ny raphia no tena be mpitrandraka ary maro ny mpandraharaha misehatra aminy ary manondrana any ivelany mihitsy. Ny atao lohamenaka indray na huiles essentielles eto Boeny dia ny mandravasarotra sy ravina mokonazy. Ravina 200 kilao eo no ahazoana lohamenaka iray kilao. Voafetra ihany ny fotoana azo itrandrahana azy ireo eto Mahajanga satria ivelan’ny lalam-pirenena dia saika tsy afaka ny lalana ato amin’ny faritra mandritra ny asara. Misy koa ny mitrandraka mahabibo, voa na tahon’ny moringa, talapetraka, hoditra katrafay, voan’ny baobab hatramin’ny saribao izay azo avy amin’ny hazo ihany koa.
Mba hahazoana ny alalana avy amin’ny Fanjakana hitrandraka zavamaniry iray dia mametraka fangatahana ao amin’ny sampan-draharahan’ny tontolo iainana misy ny toerana angatahana hitrandrahana sy ny habe eritreretina hotrandrahina, miaraka amin’ny dika mitovy ny karapanondron’ny mpangataka, ny NIF sy ny karatra statistika maha mpanangom-bokatra. Raha efa mpitrandraka dia mbola miaraka amin’ny tapakila nandoavana ny redevances sy ny fanamarinana fa tena nahavita ny fambolen-kazo nifanarahana tsy maintsy atao tao anatin’ny fanomezan-dalana taloha. Entina any amin’ny vondronolona ifotony VOI na VNA ilay fangatahana avy eo, mandalo kaominina, distrika. Mankany amin’ny chef cantonnement izay manao ny “étude de potentialité’ sy manamarina raha tena misy ny heverina hotrandrahina ao amin’ny toerana angatahina.
Ho an’ny raphia manokana dia mankao amin’i Mme Eulalie Razafindrasoa izay misahana ny “autorisation d’exportation et transport, valorisation des produits forestiers” ao amin’ny sampan-draharahan’ny tontolo iainana. Ny zavamaniry hafa kosa dia Andriamatoa Ratsitohaina Fidisoa no misahana azy. Mandalo antanatohatra maro, hatrany amin’ny talen’ny tontolo iainana io fangatahana io vao miverina amin’ny lehiben’ny sampan’asa ala. Rehefa ankatoavin’ny rehetra vao omena ny fahazoan-dalana ary voasoratra ao ny andraikitra rehetra tsy maintsy raisin’ny nahazo alalana ka anatin’izany ny fambolena hazo. Manodidina ny zanakazo 250 isaky ny vokatra iray taonina no tsy maintsy ambolen’izy ireo. Manodidina ny 5ha ka hatramin’ny 10ha eo izany ny fambolen-kazo tsy maintsy ataon’ny mpandraharaha iray isan-taona.